Fitaovana finday - Ireo eReaders rehetra | Ireo mpamaky boky rehetra (Pejy 2)
Famerenana ny loko PocketBook loko
Fanadihadiana iray amin'ireo mpamaky loko e-ink vitsivitsy eny an-tsena. Teknolojia vaovao hiaraka aminay
Pocketbook Touch HD 3 famerenana
Mamela anao ny fahatsapako anao taorian'ny fitsapana iray volana mahery. Ny tanjakao, izay tsy ampy anao ary ny fampitahana amin'ny fifaninanana
Toe-javatra teknolojia eo amin'ny tsenan'ny mpamaky amin'ny 2020
Inona no teknolojia ampiasain'ny mpamaky amin'ny taona 2020? Inona no ho avy? Ny mpamaky boky dia manana singa maro, ampahany niova ary hiova.
PocketBook dia manolotra ireo fitaovany vaovao: PocketBook Color sy PocketBook Touch Lux 5
PocketBook dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana vaovaony roa: ny PocketBook Touch Lux 5 sy ny PocketBook Color, ny mpamaky azy miaraka amin'ny efijery miloko ...
Famerenana ny Kobo Nia, mora vidy kokoa ary vahaolana bebe kokoa
Eo am-pelatanantsika ilay Kobo Nia vaovao, ilay mpamaky e-lafo lafo vidy izay tian'i Kobo hitaomana ny mpamaky vaovao ho eny an-tsena, nohadihadianay lalina izany.
Fabián Gumucio (Kobo): «Ny fifaninanana dia ny Netflix, HBO ary DAZN»
Faly izahay afaka tafitafa tamin'i Fabián Gumucio, Lehiben'ny Rakuten Kobo any Eropa nandritra ny amboaran'ny Davis nataon'i Rakuten notontosaina tany Madrid.
Xiaomi dia hanolotra ny e-book amin'ny 20 Novambra
Ny mpanamboatra aziatika dia nanomana famelabelarana amin'ny 20 novambra hanehoana ny eReader vaovao.
Review Kindle 2019 miaraka amin'ny hazavana miharo volo
Nisedra herinandro maromaro izahay ary ny Kindle vaovao ihany no misy jiro eo alohany sy ny zava-baovao.
Likebook Mimas: eReader vaovao an'i Boyue
Fantaro bebe kokoa momba ny Likebook Mimas ilay Boyue eReader vaovao izay azonao amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny tolotra fandefasana azy izao.
Boyue Likebook Mars famerenana
Androany ny famerenana ny Likebook Mars nataon'i Boyue, marika sinoa iray izay tsy fantatry ny olona maro any Espana. Ary izany dia…
Kobo Forma famerenana
Jereo hoe ahoana no tsara indrindra na iray amin'ireo mpamaky efijery lehibe tsara indrindra eny an-tsena. Volavola 8 "sy asymmetrika izay hahatonga antsika hankafy ny vakiteny
2017 ″ Kindle Oasis 7 famerenana
Notsapainay tsara ilay mpamaky Amazon vaovao. Ny tendrony 7 "an'io tampon'io ary holazainay aminao ny niainany. Aza hadinoina izany raha mila mpamaky tsara ianao
Kobo Clara HD famerenana
Amin'ity famerenana ity dia dinihintsika tsara ny Kobo Clara HD, mpamaky 6 "lehibe avy any Kobo. Mpifaninana amin'ny Kindle Paperwhite
Kobo Aura One famerenana
Jereo ny Kobo Aura One ny tanjany sy ny fihemorany. Aorian'ity famerenana ity dia ho fantatrao raha natao ho anao izy io na raha tianao ny fitaovana hafa
Kobo Clara HD, eReader izay hanomboka hamidy amin'ny 5 Jona
Kobo Rakuten dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny eReader vaovao, ny Kobo Clara HD vaovao, ny eReader eo anelanelany izay mandray efijery 6 santimetatra sy ny sivana jiro manga ho an'ny tontolo alina ...
Amazon miloka amin'ny Kindle Oasis amin'ny famakiana fahavaratra
Amazon dia nandefa ny Amazon Kindle Bazaar, bazaar izay ahitantsika fisondrotana sy fitaovana vaovao mifandraika amin'ny Kindle Oasis sy ny Amazon Fire 7 malaza ...
Fanadihadiana ny angovo eReader Max
Nisedra ny Energy Sistem MAX nandritra ny volana vitsivitsy aho ary hitako ny fahitako anao rehetra. Jereo ity fitaovana afovoany ity
Mbola tsy misy maodely eReader vaovao navoaka. Amin'ity lahatsoratra ity dia jerena ireo maodely vaovao havoaka amin'ity taona ity, ny anarany sy ny sasany amin'ireo fiasa izay hananan'ireo fitaovana ireo ...
Jereo ity fifantenana ity amin'ny sasany amin'ireo fonony tsara indrindra azontsika jerena amin'ireo maodely Amazon Kindle samihafa eny an-tsena. Tadiavo ny fonony mifanentana indrindra amin'ny zavatra tadiavinao.
Kobo Aura Edition 2, mpifaninana mafy amin'ny fitaovana Amazon amin'ity Krismasy ity
Ny maodely farany eReader an'i Kobo, ny Kobo Aura Edition 2, dia nahena ny vidiny ary mpifaninana henjana amin'ireo fitaovana avy any Amazon sy marika hafa.
Fifampiraharahana Blackfriday amin'ny mpamaky, ebooks ary boky
Safidy nohavaozina ny fihenam-bidy tsara indrindra amin'ny mpamaky, ebooks ary boky izay ho tian'ny olona mamaky rehetra
NOOK GlowLight 3 Mandresy amin'ny fanintelony ve?
Barnes & Noble dia tsy kivy ary nandefa eReader vaovao eny an-tsena. Ny Nook GlowLight 3 vaovao dia mitazona ny eReader ho kely ary manary ny takelaka ...
BQ manavao ny eReader ary mandefa ny BQ Cervantes 4
BQ dia nanangana maodely eReader vaovao: Cervantes 4. Ny fitaovana dia manana fampiasa ereader premium nefa miaraka amin'ny vidiny ambany ...
Energy Sistem dia mandray ny fijoroana ho vavolon'ny Espaniola eReader noho ny Energy eReader Max
Ny orinasan'ny Energy Sistem dia nanangana ny Energy eReader Max vaovao, eReader ho an'ireo izay mitady fampiasa bebe kokoa noho ny vola kely ...
Energy eReader Pro HD, eReader mahaliana amin'ny vidiny mifaninana tokoa
Izahay dia mamakafaka ny Energy eReader Pro HD, eReader mahaliana, miaraka amina endrika am-pitandremana fatratra ary mihoatra ny vidiny mahaliana ho an'ny paosy rehetra.
Oasis Kindle Vaovao, eReader voalohany tsy tantin'ny rano any Amazon
Amazon dia nanangana eReader vaovao. Ny Kindle Oasis vaovao dia kinova vaovao sy nohatsaraina indrindra amin'ny eReader be indrindra avy amin'ny orinasan'i Bezos ary mora kokoa ...
Raha te-hividy ebook mora vidy ianao dia asehonay anao ireo boky elektronika 7 mora izay azonao amin'ny vidiny mahaliana sy mihena kokoa.
Raha manana BQ Cervantes Touoch Light izay voasakana ianao, dia manolotra vahaolana marobe amin'ireo olana sedrain'ny maro aminareo amin'ity eReader ity.
Ny Kobo Aura Edition 2 dia eReader 6-inch izay natolotr'i Kobo Rakuten teo akaikin'ny Kobo Aura One, ilay eReader ...
Tsy azonao antoka hoe inona ny endrika vakin'ny Kindle? Ampidiro ary fantaro ny momba ny endrika Kindle sy rakitra elektronika izay mifanaraka amin'ny Amazon eReaders.
Everlast Notebook dia kahie taratasy synthetic izay ahafahantsika manao nomerika ny atiny rehetra ary mampiasa azy io imbetsaka araka izay tadiavintsika ...
Mitady ny eReader tsara indrindra? Ireo no lafiny tokony horaisina mba hividianana ny boky elektronika tsara indrindra ary manolotra ny lisitry ny eBook tsara indrindra izahay
Kobo Aura H2O Edition 2, filokana vaovao an'i Kobo hiadiana amin'ny Kindle Amazon
Ny Kobo Aura H2O Edition 2 vaovao dia efa misy eny an-tsena, izay safidy mahaliana amin'ireo fitaovana Amazon hafa.
Nanavao ny Fire 7 sy Fire HD 8 i Amazon
Nanavao ny takelaka roa amin'ny vidiny ambany indrindra i Amazon. Ireto dia Fire 7 sy Fire HD 8, maodely roa mora vidy izay tsy misy zava-baovao ao anatiny ...
Ny fahitana dia mino, ny ankizy dia mbola aleony mamaky boky amin'ny taratasy, ary manilika ebook
Ny ankizy sy ny tanora dia mbola aleony mamaky boky an-taratasy, nefa tsy mitandrina loatra amin'ireo e-book izay tsy voamariky tanteraka eo amin'ny tsena.
Kobo Aura H2O Edition 2, eReader tsy misy rano vaovao
Ny firmware Kobo farany teo dia manambara ny fisian'ny eReader vaovao antsoina hoe Kobo Aura H2O Edition 2, fa hanao ahoana kosa ity eReader vaovao ity?
Kobo Plus, tahan'ny fisaka vaovao ho an'ireo boky ebook eny an-tsena
Kobo Plus dia tahan'ny ebook vaovao noforonin'i Kobo Rakuten izay hanandrana hifaninana amin'ny Kindle Unlimited, saingy any Belzika sy Netherlands ihany no misy azy ....
EReaders 7 tonga lafatra hanome an'ity Krismasy ity
Androany fa manatona haingana be ny Magy Telo dia asehonay anao ireo eReaders 7 tonga lafatra hanome an'ity Krismasy ity ary azonao antoka izany.
Scripto, solosaina finday maimaimpoana ho an'ny mpanoratra
Scripto dia solosaina finday kely mampiasa fitaovana maimaimpoana sy rindrambaiko maimaimpoana hahafahan'ireo mpanoratra miasa tsy misy fanelingelenana ...
Ilay Nook Tablet 7 vaovao dia misy malware ao anatiny [havaozina]
Ny Nook Tablet 7 dia toa tsy tsara araka ny nieritreretantsika azy. Ao amin'ny rindrambaiko misy azy dia misy tsiambaratelo izay tsy ho hitan'ny mpampiasa tsara ...
Azontsika atao izao ny mamorona ny eReader noho ny fivarotana E-Ink
Ny orinasam-pirinty elektronika malaza eran-tany dia efa manana fivarotana an-tserasera. Ny fivarotana E-Ink dia manome ny fahafaha-mividy amin'ny mpampiasa farany
Tagus Da Vinci, ilay eReader premium marina avy any Casa del Libro
Tagus Da Vinci no eReader vaovao entin'i Casa del Libro sy Tagus eo amin'ny tsena Espaniola. EReader premium misy teknolojia vaovao ...
Ny E-Ink dia hifantoka amin'ny taona vaovao amin'ny marika fanoratana elektronika
Ny E-Ink dia atokana amin'ny taona 2017 hamokarana sy hizarana marika maherin'ny 40 tapitrisa amin'ny ranomainty elektronika, tsena efa fantatra amin'ny E-Ink ...
Pocketbook Touch Lux 3 Ruby Red, eReader miaraka amin'ny lokon'ny loko
Pocketbook Touch Lux 3 Ruby Red dia eReader vaovao izay manana trano mena izay hanome naoty loko ny vakiteninay amin'ity fitaovana ity
Rakuten no mpanohana lehibe an'ny FC Barcelona
Ilay orinasa manana Kobo, Rakuten, no mpanohana lehibe indrindra an'ny FC Barcelona ankehitriny, ny klioba dia fampisehoana ho an'ny vokatra Kobo, Wuaki.tv, sns.
Hiseho amin'ny eReaders 5 ve ny Bluetooth 2017?
Bluetooth 5 dia efa eo amintsika ary mety hisy fiatraikany tsara amin'ny eReaders amin'ny taona ho avy io, indrindra ny fitaovana Amazon ...
Hisense A2, finday misy efijery elektronika izay manana Android farany
Hisense A2 dia finday vaovao misy efijery roa misy ny kinova Android 6.0 ary koa efijery fanoratana elektronika 5,2-inch ...
Amazon Polly, ilay feo hiaraka aminay amin'ny famakianay
Amazon Polly no ho mpanampy amin'ny feo vaovao izay hampidirin'i Amazon ho lozisialy TTS amin'ny fitaovany sy eo amin'ireo mpampiasa Amazon Web Services ....
Fanavaozana ny zoma: mahazo fanovana vaovao i Tolino sy Kindle
Ny Kindle sy Tolino eReaders dia tsara vintana satria amin'ity andro ity dia hahazo fanavaozam-baovao amin'ny fitaovany izy ireo, fanavaozana izay hanova zavatra ...
reMarkable, kahie nomerika misy efijery lehibe
reMarkable dia kahie niomerika misy efijery 10,3-inch izay manome ny fahafahana manao nomerika ny lahatsoratray ary koa mamaky ao ...
Onyx Boox MonteCristo, eReader lafo vidy tahaka ny sigara
Ny marika OnyxBoox dia nanangana ny Onyx Boox MonteCristo, eReader 6-inch manana teknolojia Carta ary vidiny lafo ho an'ny tsena na toa ...
Ny afo Amazon vaovao dia manafoana ho azy hatrany
Ny Amazon Fire vaovao dia mitohy voafafa mandeha ho azy, voafafa ireo takelaka ireo noho ny olana amin'ny Amazon Freetime, olana taloha ...
Ebay sy ny tsena faharoa, safidy tsara ho an'ny maro izay maniry eReader
Ny tsena fanindroany ho an'ny eReaders sy ebook dia zavatra iray izay mitombo be nefa tsy misy azo raketina momba azy na toa ...
InkBook Classic 2, eReader ambaratonga fidirana hafa?
InkBook Classic 2 dia eReader fototra izay hanandrana hifaninana amin'ny Kindle sy Kobo Touch 2 fa ny vidiny dia tsy ambany loatra araka ny eritreretintsika ...
InkBook Prime, eReader tsy dia lafo loatra
InkBook Prime dia eReader 6-inch izay efa azontsika vidiana amin'ny vidiny lafo nefa vitsy kokoa ny asany noho ny Kindle Paperwhite ...
Ny UK dia miomana amin'ny sabotsy sivily
Ny UK koa dia hanana sabotsy sivily amin'ity taona ity, andro iray sahala amin'ny Black Friday fa miaraka amina fiantsenana milamina kokoa sy korontana ...
Manana $ 50 aho, inona no vidiko, Tablet Nook 7 na Afo avy any Amazon?
Amin'ity herinandro ity dia hanomboka ny fivarotana ny Nook Tablet 7, fitaovana 50 dolara hifaninana amin'ny Fire of Amazon izay manana vidiny mitovy ...
Ny mpanampy Alexa dia tsy hifanaraka amin'ny fanaraha-mason'ny ray aman-dreny
Alexa dia efa eo amin'ny takelaka Amazon Fire rehetra noho ny fanavaozana vaovao saingy misy fotoana tsy ahafahanay mampiasa ity mpanampy ny feo ity ...
Nook Tablet 7, ny famelomana indray an'i Barnes & Noble $ 50
Barnes & Noble dia namoaka ny takelaka $ 50 ihany koa. Ny Nook Tablet 7 vaovao dia amidy amin'ny zoma mainty manaraka ary hanasongadinana ny Play Store ...
Amazon Marketing Services, serivisy Amazon vaovao ho an'ny mpanoratra sasany
Amazon Marketing Services dia serivisy vaovao avy any Amazon izay hanampy ny mpanoratra hanao doka ny ebook ary hamadika azy ireo ho bestsellers ...
Tsy ho tonga (indray) ny Kobo Aura One hatramin'ny 2017
Ny Kobo Aura One dia hamely ny tsena indray amin'ny 2017, farafaharatsiny mba loharanom-baovao marobe manondro, tahiry lehibe kokoa noho ny mahazatra amin'ny fangatahana
Sony dia manamafy ny fampitsaharana ny Sony DPT-S1 saingy manambara vokatra hafa ...
Sony dia nanamafy ny fampitsaharana ny Sony DPT-S1, eReader efijery lehibe izay tsy hamboarina intsony ho an'ny maodely hafa izay havoaka tsy ho ela ...
Boston hametraka tambajotram-boalobok'ireo fampahalalana misy fampisehoana ranomainty elektronika
I Boston dia tanàna iray hafa izay manana tontonana elektrika hanehoana ny mombamomba ny vahoaka ao aminy, toerana noforonin'i Soofa ...
Onyx Boox Kepler Pro, eReader premium "akaiky" misy vidiny "premium" be
Onyx Boox dia namidy ny eReader vaovao Kepler Pro. EReader misy endri-javatra avo lenta nefa misy vidiny lafo be ho an'ireo mpampiasa azy ...
Tolino Vision 4 HD, ilay eReader alemanina izay tara
Tolino dia hanomboka rahampitso ny Tolino Vision 4 HD vaovao, eReader mahatohitra rano, misy jiro manga ary hanana efijery 6-inch ...
Amazon dia natambatra ho mpanamboatra takelaka fahatelo manerantany
Ny orinasa IDC dia manohy manonona an'i Amazon ho mpanamboatra takelaka fahatelo lehibe indrindra manerantany, zavatra iray izay nisy nandritra ity taona ity ...
Tao amin'ny Fair Frankfurt dia tsy ny Boeye eReader vaovao ihany no fantatsika fa ilay maodely iReader 2 vaovao na fantatra koa amin'ny hoe iReader Plus ...
Boeye T103, eReader misy efijery 10-inch
Boeye T103 dia eReader efijery lehibe miaraka amin'ny teknolojia Mobius izay nalatsaky ny Frankfurt Fair, eReader 10 santimetatra ...
Barnes & Noble dia manao tablette 50 $ ho azy
Namoaka ny sary ny FCC ary nitatitra momba ny fitaovana Barnes & Noble vaovao. Ity Nook ity dia ho takelaka 50 dolara 7 mirefy ...
Tagus Iris, ilay «premium» eReader vaovao avy any Casa del Libro
Tagus Iris no maodely vaovao an'ny marika Tagus, ny fianakaviana Espaniola eReader dia manolotra eReader miaraka amin'ny teknolojia Carta ary vidiny somary avo ...
Handao ny tsenan'ny takelaka ve i Microsoft ho an'ny Surface Book?
Microsoft dia nanolotra fitaovana vaovao, anisan'izany ny Surface Book nohavaozina nefa tsy mahalala na inona na inona momba ny Surface Pro 5 ho avy isika, hafahafa, sa tsy izany?
Vixole Matrix, Sneakers azo ampiasaina hamakiana
Vixole Matrix dia kiraro miaraka amin'ny efijery LCD izay manome fahafaha-manao betsaka kokoa noho ny afaka mamaky azy ireo, toy ny firaketana ireo dingana ...
Microsoft koa dia hanana fitaovana elektronika azy manokana
Microsoft Research dia nanolotra fitaovana vaovao misy ranomainty elektronika, zavatra fantatra amin'ny hoe ePaper izay hisolo ny post-its ankehitriny ...
Ny fararano dia lany amin'ny eReaders
Ny fandefasana eReaders vaovao dia antenaina amin'ny fararano, zavatra izay tsy mahazatra intsony satria azontsika tsoahina avy amin'ireo fandefasana vitsivitsy ...
Icarus Illumina E654BK, eReader vaovao miaraka amin'ny Android
Icarus dia manohy mamokatra eReaders, tamin'ity indray mitoraka ity dia nanolotra ny Icarus Illumina E654BK, eReader efijery kely misy Android amin'ny zava-drehetra ...
Amazon dia manakana ny fisintomana amin'ny Kindle voalohany na izay lazain'ny mpampiasa azy
Mpampiasa maro no mimenomenona amin'ny tsy fahafahany mandefa ireo ebook novidiny tany amin'ny eReader, Kindle voalohany an'i Amazon, maodely tena lany andro nefa miasa ...
Ny tatitra FCC dia manamafy ny Bluetooth Kindle Oasis sy ny tsy fahampian'ny fakan-tsarimihetsika
Tapitra ny fameperana amin'ny tatitra FCC Kindle Oasis ary azontsika atao ny manamarina ny bateria sy ny fisian'ny bluetooth ...
Hanomana Kindle Voyage vaovao ve i Amazon?
Amazon dia manolotra fihenam-bidy lalina amin'ireo mpampiasa premium. Miresaka eReader vaovao eny an-dalana ireo fihenam-bidy ireo. Hisy Kindle Voyage vaovao ve?
Kobo manamboatra Kobo Aura One sy Kobo Aura Edition 2 olana amin'ny bateria
Ireo eReaders vaovao dia manana olana amin'ny bateria, zavatra izay hamboarina amin'ny fanavaozana ny firmware na izany dia miteny amin'ny mpampiasa azy i Kobo ...
Wolder miBuk Mirage, eReader ankehitriny?
Ny orinasa Espaniola Wolder dia nanangana eReader vaovao antsoina hoe miBuk Mirage, eReader misy efijery fikitika fa misy teknolojia taloha ...
Onyx Boox Prometheus, efijery lehibe eReader
Onyx Boox Prometheus dia eReader efijery lehibe natomboka tamin'ny tsena rosiana ary mety hahatratra ny tsena hafa toa ny Espaniôla ...
Ny Sony DPT-S1 dia miverina eny an-tsena na farafaharatsiny miverina amin'ny tahiry
Ilay eReader lehibe, Sony DPT-S1 dia miverina eny an-tsena indray satria fenoina ny tahiriny, na dia noheverina ho nisintona maharitra aza ...
iPhone misy ranomainty elektronika na iPad amin'ny endrika eReader, ahoana ny hevitrao?
Omaly dia nisy lesoka niparitaka momba ny mety ho iPhone misy efijery E-Ink, zavatra tsy dia manana fototra firy saingy nino ny olona izany noho ny vaovao ...
Kobo dia miato ny fivarotana Kobo Glo HD
Raha ny fantatra dia nanohy ny Kobo Glo HD i Kobo, vaovao mahagaga na dia manana safidy hafa amin'ny Kobo Aura Edition 2 na Kobo Aura One ...
Ny takelaka Google dia hiasa na dia mety ho eReaders ihany koa
Ny takelaka Google vaovao dia hanana Andromeda OS, rafitra miasa mifantoka amin'ny tontolon'ny asa fa tsy ny tontolon'ny famakiana ...
Ny Yotaphone 2 dia mahatratra 140 $ ny tsena farany
Ny Yotaphone 2 dia terminal misy efijery roa sosona izay efa ela be no natomboka saingy tsy dia nahomby loatra izany tamin'ny farany noho ny vidiny lafo, saingy ankehitriny tsy dia izany.
Ny kioska ve no ho avin'ny famakiana elektronika?
Ny kioska dia miha-mahazatra ka hatramin'ny fametrahana azy ireo amin'ny tranomboky sy tobim-pitaterana, fa ny ho avy ve?
Amazon Fire HD 8 amidy izao ary tonga any an-trano
Amazon Fire HD 8 dia efa amidy ary manomboka mahatratra ireo izay efa nanafatra azy io satria efa azony avy amin'ny magazay.
Nanavao ny Kindle for Kids i Amazon
Amazon dia nanavao ny fehin'ny eReaders ho an'ny ankizy. Ka ny Kindle vaovao ho an'ny ankizy dia mampiditra modely vaovao amin'ny Kindle amin'ity taona ity ...
Kobo Aura One manaitra ny rehetra amin'ny varotra azy (ao anatin'izany i Kobo)
Ny Kobo Aura One dia nandany ny tahiry voaomana ho an'ny varotra ao anatin'ny iray volana latsaka, zavatra iray izay gaga, anisan'izany ny orinasa eReader
Mihena ny ebooks sy eReaders, ho farany ve?
Manam-pahaizana maro no miresaka momba ny fihenan'ny ebooks sy eReaders, saingy tena marina ve izany? Hanjavona tokoa ve ny tsena?
Moa ve i Alexa no antony hampamirapiratra ny Fire HD 8?
Nampidirina tao amin'ny takelaka Amazon ny Alexa, saingy tena miasa ve io endri-javatra io? Tena hampiova ny Fire HD 8 amin'ny sisa ve izany?
Samsung Galaxy Tab A miaraka amin'ny S Pen dia ofisialy any Korea Atsimo
Ny takelaka Samsung vaovao misy S Pen dia efa misy ary aseho amin'ny fomba ofisialy any Korea Atsimo, ka tsikelikely dia hoentina any amin'ny firenen-kafa ...
Amazon dia manolotra fomba ofisialy Fire HD 8 vaovao miaraka amin'ny efijery 8-inch
Amazon dia nanangana ny Fire HD 8 vaovao, takelaka nohavaozina miaraka amin'ny fizakantena lehibe sy fifandraisana amin'i Alexa, mpanampy virtoaly malaza ao Amazon ...
Ny Nexus 7 vaovao dia azo antoka fa tsy ho an'ny famakiana
Efa fantatsika ny fitaovan'ny Google Nexus 7 vaovao, fitaovana matanjaka izay mitovy kely amin'ny takelaka ho an'ny mpamaky ...
Ny processeur vaovao Freescale i.MX 7 dia handany fotoana hahatratra ireo eReaders
Toa tsy maharitra ela ny processeur Freescale i.MX 7 dia hivoaka na dia hivoaka aza ary hanomboka amin'ny eReaders avo lenta ...
Ny takelaka Nexus 7 dia hanana mpandimby, saingy ilaina ve izany amin'ny famakiana?
Evan Blass dia naneho fampahalalana momba ny takelaka Google vaovao izay handimby ny Nexus 7 vaovao izay tena nahomby ...
Airbook City LED, mpifaninana Okrainiana amin'ny Kindle?
Airbook City LED dia eReader izay mihoatra ny Kindle fototra amin'ny resaka hardware, na izany aza tsy miaraka aminy ny vidiny, mendrika ve ity eReader ity?
Windows 10 tsy ho ela dia hanana ny Blue Light Reduction hanafoanana ny jiro manga amin'ny efijery
Nanambara i Microsoft fa amin'ny fanavaozana ny Windows 10 amin'ny ho avy dia ho voaray ny endrika Blue Light Reduction, endrika iray izay hanala ny jiro manga ...
Lenovo Yoga Book, takelaka iray ho an'ireo izay te-hanoratra hatrany
Lenovo Yoga Book dia takelaka misy klavier mahaliana izay azo ovaina ho kahie handinihana ary hanoratra izay tadiavintsika tanana ...
Safidy telo hafa amin'ny Kobo Aura One izay azontsika atao manomboka izao
Torolàlana kely misy safidy telo hafa amin'ny Kobo Aura One, eReaders telo izay manana efijery lehibe misy vahaolana kely sy vidiny ambany na mitovy ...
Ny Kobo Aura One dia tsy manana mpamaky karatra microsd anatiny
Bilaogy italiana iray no nanokatra ny Kobo Aura One ary nahatsikaritra fa tsy manana mpamaky karatra microsd anatiny hahafahany manitatra ny fahafahan'ny eReader ...
Pocketbook Touch HD, eReader iray izay mahazo Carta
Pocketbook Touch HD dia eReader miaraka amin'ny teknolojia Carta izay manolotra ihany koa ny fihainoana audiobooks, na dia manana asa hafa fanta-daza aza izy ...
Afaka mihaza boky ny belza fa tsy Pokémon
Any Belzika, natsangana ny vondrona Facebook iray izay mamporisika ny fihazana ireo boky miafina any amin'ny tanàna samihafa mba hahitana azy ireo a la Pokémon
Raha midona ny Windows 10 anao dia milamina ny Kindle anao
Misy olana vaovao miseho ho an'ny mpamaky miaraka amin'ny Windows 10 Anniversary Update. Toa izao dia mihidy ny solosaina amin'ny Windows 10 ny Kindle ...
Ny fanavaozana Windows 10 vaovao dia manome olana amin'ny Kobo eReaders
Ny fanavaozana Windows 10 vaovao dia miteraka olana amin'ireo mpampiasa Kobo eReaders, mamela azy ireo amin'izao fotoana izao nefa tsy afaka miasa miaraka amin'ny pc ...
Ilay Kobo Aura One dia efa manana lamba fatoriana
Ny Kobo eReader vaovao dia tsy ho tonga miaraka amin'ny fitaovana vaovao fotsiny fa misy kojakoja vaovao toa an'ity fatoriana ho an'ny Kobo Aura One ...
Ny tontolon'i Harry Potter dia hanana ebook vaovao telo
Ny tontolon'i Harry Potter dia manitatra tantara vaovao, amin'ity indray mitoraka ity dia misy tantara fohy telo izay aseho amin'ny endrika ebook ho an'ny Pottermore
Samsung Galaxy Tab A Nook, takelaka vaovao avy ao amin'ny Barnes & Noble
Barnes & Noble dia nandefa ny Samsung Galaxy Tab A Nook, takelaka 7-inch misy efijery lehibe ary vidiny manintona ho an'ireo rindrambaiko sy fitaovana ao aminy.
Kobo Aura One sy ny Fanontana 2 dia hamely ny tsena amin'ny volana septambra ho avy izao
Kobo sy Rakunten dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny eReaders vaovao: ny Kobo Aura One sy ny Kobo Aura Fanontana 2, eReaders roa misy endrika lehibe ...
Kobo dia manambara ny Kobo Aura One
Kobo dia te-hanao izay sarotra amin'ny Amazon amin'ny Aura One izay vao natolony manerantany. Mpamaky mahaliana miaraka amin'ny tombony maro.
Samsung dia manamafy ny famoahana ny Samsung Galaxy Tab S3 manaraka
Samsung dia nanamafy ny fisiany sy ny fanombohana ny Samsung Galaxy Tab S3 manaraka, zavatra izay ho hitantsika amin'ny IFA 2016 any Berlin amin'ny volana septambra ...
Pocketbook Inkpad 2, safidy iray hafa amin'ny Kindle Oasis
Pocketbook dia nanolotra ny eReader Pocketbook Inkpad 2, eReader mitovy endrika amin'ny Kindle Oasis fa misy efijery 8-inch ary maro hafa ...
Singapore mba hampiasa fampisehoana e-ink miloko amin'ny fijanonan'ny bus
Hampiasa panneaux e-ink ny governemanta Singapore rehefa mijanona ny bus na dia ho panel e-ink vita amin'ny loko sy lehibe aza ...
Ny taratasy elektronika dia hanampy amin'ny ady amin'ny asan-dahalo
Ny Fikambanana Amerikanina Psychology Association dia hametraka toerana mafana Wi-Fi hahitana ny fampijaliana. Ireo teboka wifi ireo dia hampiasa taratasy elektronika ho an'ny asany ...
Amazon dia manova ny sarin'ny eReaders ho an'ny efijery maizina kokoa
Amazon dia nanova ny sarin'ny fitaovana tsy misy efijery jiro, izay misy efijery maizimaizina noho ny teo aloha, izay tena izy ...
Samsung Galaxy Tab S3 dia mety hahatratra ny tsena ny 1 septambra ho avy izao
Ny Samsung Galaxy Tab S3 dia eny an-dalambe amin'ny 1 septambra ho avy izao, daty iray izay hahalalantsika ireo kinova 2 an'ny Samsung Galaxy Tab S3 ...
ZTE ZMax Pro, finday na takelaka $ 99?
Ny ZTE ZMax Pro dia finday $ 99 izay atolotra ho mpifaninana henjana amin'ny Amazon Fire sy takelaka hafa mamela ny famakiana mahafinaritra ...
eStories, serivisy vaovao ho an'ny… Audiobooks
eStories dia serivisy streaming streaming audiobook izay manandrana mifaninana amin'ny serivisy hafa toa ny Audible Unlimited na Findaway ...
Pejy Tolino, eReader vaovao an'i Tolino ho an'ny ambany
Tolino Page no fitaovana ambany farany ambany an'i Tolino, fitaovana mety indrindra ho an'ireo izay te handany kely amin'ny eReader ary betsaka amin'ny ebook ...
Manana eReader miaraka amin'ny efijery miloko ve i Amazon?
Amazon dia mety manana mpamaky iray misy efijery miloko ao amin'ny efitranony, fitaovana tsy manam-paharoa hanakana ny takelaka tsy hivarotra intsony, saingy marina ve izany?
Ny Sony DPT-S1 dia mitohy mivarotra, fa amin'ny vidiny mora kokoa
Ny Sony DPT-S1 dia mitohy amidy, na dia amin'ny vidiny ambany kokoa noho ny mahazatra aza, zavatra iray mahatonga ny fitaovana hitohy ho lafo toy ny teo ...
Iza ny eReader hovidiana, ny Kindle Basic na ny Kobo Touch 2?
Iza no eReader hovidiana, Kindle Basic na Kobo Touch 2? Eto isika dia mijery ny mahatsara sy maharatsy an'ireo fitaovana fototra ireo ho an'ireo olona te hamaky fotsiny ...
Manomboka mivarotra ny eReader azy manokana ny magazay lehibe Aldi
Nanomboka nivarotra eReaders manokana i Aldi, amin'ity tranga ity ny maodely Onyx Boox, saingy tsy fantatray izay maodely ampiasaina amin'ity eReader ity ...
Gvido, eReader ho an'ny ankamaroan'ny mpitendry zavamaneno
Gvido dia fitaovana manana efijery fanoratana elektronika indroa, fitaovana iray mifantoka amin'ny tontolon'ny mpitendry mozika, hahafahany manova sy mamorona isa ...
Toy izao no nanintona azy tao amin'ny e-Reader Tsara 13.3
Ny e-Reader tsara dia nahazo antoka famatsiam-bola ampy ho hitantsika tsy ho ela eo amin'ny tsena amin'ny maha Android eReader azy.
miBuk Harmony, eReader vaovao fiaviana espaniola
miBuk Harmony dia eReader vaovao avy amin'ny Espaniola izay manana lanja sy vidiny tena ambany, na dia tsy misy mahasakana ny kalitaony aza ...
Mamorona Kindle Audio Adapter anao tsy latsaky ny $ 20
Te hahazo ilay Kindle Audio Adapter vaovao amin'ny vola kely ve ianao? Manolotra anao ny fomba fanaovana izany amin'ny fomba mora sy haingana ...
Takelaka 3 tsara indrindra ho an'ny ankizy eny an-tsena
Mitady takelaka ho an'ny zanakao ve ianao? Eto izahay dia manolotra ireo takelaka telo tsara indrindra ho an'ny ankizy eny an-tsena, ny telo ho an'ny kely indrindra amin'ny trano ...
Icarus koa dia manana eReader 13-inch
Icarus dia nanangana eReader miaraka amin'ny efijery 13-inch amin'ny alàlan'ny sehatra crowdfunding, zavatra mahaliana ho an'ireo izay mitady eReader toy ity ...
Amazon izao dia manohana famandrihana ho an'ny Onyx Boox Max
Ny Onyx Boox Max dia azo tehirizina amin'ny alàlan'ny Amazon ankehitriny. Handefa ny efijery vaovao eReader vaovao aorian'ny iray volana ...
Ahoana ny fametrahana Bookerly, Ember, Roboto, ary endritsoratra hafa amin'ny Kobo eReaders
Ampianarinay anao ny fomba fametrahana fonosam-baravarana toa ny Bookery, Ember, Roboto, ary ny hafa amin'ny fitaovanao Kobo hahafahanao manana safidy maromaro.
Gaga antsika ny BQ amin'ny BQ Cervantes 3, mpamaky vaovao eny an-tsena
Nanaitra antsika rehetra ny BQ tamin'ny Cervantes 3, eReader vaovao avy amin'ny mpanamboatra Espaniola miaraka amin'ny teknolojia Carta ary avo lenta ...
Oasis Kindle vs Kobo Aura H2O, fifandonan'i colossi?
Apetratsika mifanatrika ny Kindle Oasis sy ny Kobo Aura H20, roa amin'ireo eReaders tsara indrindra eny an-tsena, fa iza no tsara amin'izy roa?
Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ireo eReaders roa tsara indrindra eny an-tsena mifanatrika
Ny Kindle Oasis vaovao dia efa ofisialy ary anio dia ampifanarahintsika amin'ny teo alohany, ny Kindle Voyage hahafantarana ny fomba itovizany sy ny mahasamihafa azy ireo.
Plugin vaovao dia manampy lahatsoratra amin'ny kabary any Caliber
Plugin vaovao no natomboka tao Caliber ahafahan'ny mpamaky mamaky boky, ny hany ilainao dia mila feo tsara ianao mba ho feno ny traikefa
Hividy anao ny Kindle taloha anao i Amazon raha tsy tianao ny manavao azy
Niova hevitra i Amazon ary nametraka ny fandaharana Kindle nividy sy nivarotra tamina fomba tsy voafetra, hanovana ilay Kindle taloha ho an'ny vaovao ...
Tsara eReader 13.3 eReader izay nahazo famatsiam-bola, gaga ny rehetra
Ny eReader Good eReader 13.3 malaza farany nahazo ny famatsiam-bola nangatahana, famatsiam-bola avo lenta amin'ny vidin'ny fitaovana ...
Goodereader dia mandefa eReader 13-inch
Na dia tsy niasa araka ny nantenain'i Goodereader aza ny Ultimate eReader, ny marina dia tsy nanakivy ny malaza ...
Visionect dia mandefa fampisehoana ranomainty miloko 32-inch
Visualect dia nandefa fampisehoana vazaha elektronika lehibe roa, ny iray miloko ary ny iray kosa mainty sy fotsy, samy manana ny refy 32 cm ...
Ny eReader Onyx Boox Max dia efa amidy mialoha amin'ny 585 euro
Onyx Boox Max dia azo alaina amin'ny vidiny 585 € ho an'ny eReader 13,3 "amin'ny efijery sy Android 4.0
Slate, vahaolana amin'ny fandraisana an-tsoratra nomerika
Slate dia fitaovana ahafahantsika manaova nomerika izay rehetra soratantsika momba azy raha mbola taratasy sy pensilihazo na penina mahazatra .....
Ahoana no hahalalanao ny maodelin'ny Amazon Fire Tablet azonao
Ampianarinay ianao hahalala ny maodely takelaka Fire izay anananao avy any Amazon amin'ny alàlan'ny laharana serial sy izay tsy anampian'ny orinasa azy manokana
InkBook 8, eReader efijery lehibe
InkBook 8 no eReader vaovao avy amin'ny Arta Tech izay manolotra efijery 8-inch sy Android amin'ny vidiny manintona, farafaharatsiny ho an'ny mpampiasa maro ...
Lahatsary iray mampiseho ny Onyx Boox Max 13-inch ary 96 ″ Boox N9,7
Efa hitanao sahady ny mampiavaka ny Onyx Boox Max sy Boox N96 amin'ny horonantsary 30 minitra navoakan'ny mpivarotra iray any Eropa.
Onyx Boox N96 sy N96ML, eReaders efijery lehibe roa nanavao
Onyx Boox N96 no maodely efijery lehibe hafa hitanay tamin'ny mpanamboatra sinoa. Misy ihany koa ny kinova mahery kokoa antsoina hoe N96ML.
Ny Icarus Illumina XL dia azo jerena ao Amazon izao
Ny Icarus Illumina XL dia efa amidy any Amazon na dia tsy Kindle aza. EReader misy efijery lehibe sy Android 4.2 toy ny rafitra fiasa.
Night Shift, ny valin'ny fahazavana manga an'i Apple
Night Shift no anaran'ny maody Apple vaovao izay manafoana na mifehy tsara ny jiro manga amin'ny efijery amin'ny fitaovana miaraka amin'ny iOS 9.3 izay manana 64 bits.
Aldiko, azo alaina amin'ny iPad sy iPhone izao
Ny fampiharana famakiana Aldiko dia azo alaina amin'ny iOS izao. Fampivoarana miovaova amin'ny fampiharana famakiana malaza izay hanolotra mitovy amin'ny kinova Android.
Amazon dia mampidina ny mpamaky alohan'ny Zoma Mainty
Ny zoma mainty dia efa tonga tany Amazon sy ireo eReaders an'ity orinasa ity, na ny taloha na ireo eReaders farany teo. Haharitra 2 volana ireo fihenam-bidy ireo
Onyx dia mampiseho ny mpamaky azy 13-inch
Onyx Boox dia namoaka sary an'ny mpamaky vaovao, eReader 13-inch izay ho lehibe indrindra eny an-tsena, amin'ny lohataona 2016.
EReaders 3 hafa ho an'ny Kindle sy Kobo
Manolotra eReaders telo hafa ho an'ny eReaders malaza indrindra eny an-tsena izahay. Safidy sarotra atao fa ny iray amin'ireo fitaovana ireo dia mendrika.
Icarus Illumina XL 8-inch dia azo zahana amin'ny famandrihana izao
Icarus Illumina XL dia manana efijery valo hakiho izay mamela ny fidirana amin'ny efijery malalaka be hamaky ireo boky tianay.
Nook GlowLight Plus dia efa eo amintsika
Ny Nook GlowLight Plus dia amidy ankehitriny. EReader misy teknolojia mahazatra, indrindra ny Carta, izay misy fanoherana ny rano sy fikorontanana.
Icarus Illumina XL mirefy 8-inch hivoaka amin'ny Novambra
Icarus Illumina XL dia hanana Android ho OS, izay hamela anao hametraka karazana fampiharana toa an'i Amazo na Kobo.
Tolino Shine 2 HD na ahoana ny vidin'ny fanamarinana 40 euro
Tolino SHine 2 HD dia eReader vaovao mandika ny Tolino Vision 3 HD nefa miaraka amin'ny vidiny ambany noho ny tsy fisian'ny Tap2flip sy ny fanoherana ny rano.
La Casa del Libro manavao ny Tagus Lux 2015
La Casa del Libro dia nanavao ny eReader Tagus Lux 2015 miaraka amin'ny fampidirana ny haitao Carta amin'ny eReader ary ny anarany atao hoe Tagus Lux 2016.
Ny rehetra momba ny karatra microSD ao amin'ny takelaka Fire vaovao any Amazon
Amazon dia nanangana ny takelaka Fire vaovao izay miaraka amin'ny tombony lehibe amin'ny fampidirana ny slot karatra microSD.
Notsapainay ny Surface 3, fitaovana miavaka
Ny Surface 3 dia hybrid eo anelanelan'ny solosaina finday sy ny takelaka ary notsapainay izy mba hitondra anao ity famerenana feno ity.
Mendrika ve ny mividy ilay Kindle Fire $ 50 vaovao?
Andininy izay ezahantsika hanome valiny ny fanontaniana; Mendrika ny mividy ny Kindle Fire vaovao amin'ny $ 50 ve?.
Kindle Fire dia tsy hilalao horonantsary noho ny lesoka fanavaozana
Ny Kindle Fires dia nahazo fanavaozana olana izay mahatonga azy ireo tsy afaka milalao horonantsary amin'ny alàlan'ny streaming, zavatra izay amboarin'i Amazon.
EReaders 5 tonga lafatra amin'ity fahavaratra ity
Ny fahavaratra no fotoana mety indrindra hankafizana ny famakiana ary izany no antony hanirianay hanolotra eReaders 5 tonga lafatra amin'ity fahavaratra ity.
Aldi dia manolotra an'i Billow, eReader fiaviana Belzika
Billow no eReader vaovao izay hozarain'i Aldi any amin'ireo magazainy manerana an'i Belzika, na dia tsy eReader manana ho avy tsara aza izy io, farafaharatsiny.
Ny fanavaozana ny lozisialy Mega dia noforonina hanenjehana ireo Kobo eReaders
Misy ihany koa ny hacks EReader, amin'ny tranga Kobo, ny rindrambaiko tsara indrindra dia ny Fanavaozana Mega avy amin'ny mpampiasa izay nanambatra ny entana tsara rehetra.
Kindle for Kids, fonosana vaovao an'ny Amazon ho an'ny ankizy
Kindle ho an'ny ankizy dia fonosana vaovao iray avy any Amazon izay misy Kindle Touch eReader fototra, casing miloko, ary hidin-trano mihidy.
Famerenana ny Kobo Aura H2O, ny rano anaty rano Kobo eReader
Famerenana ny Kobo Aura H2O malaza, famerenana manokana an'i Todo eReaders amin'ny fitaovana avo lenta avy any Kobo.
M96 Plus, ilay eReader lehibe avy any Onyx Boox dia tonga tany Eropa
Onyx Boox dia nanavao indray ny efijery lehibe eReader. Ity eReader ity dia antsoina hoe M96 Plus ary efa amidy eran'i Eropa amin'ny vidiny lafo.
Torohevitra 10 hividianana eReader
Lahatsoratra mahaliana izay anoloranay toro-hevitra 10 izay tokony hoheverinao rehefa mividy eReader na boky elektronika.
BraiBook, boky elektronika amin'ny braille
Lahatsoratra izay ahalalantsika ny BraiBook, boky elektronika amin'ny soratra braille.
Noteslate Shiro, dingana iray hafa mankany amin'ny kahie nomerika
Noteslate Shiro dia kahie dizitaly Noteslate misy efijery 6,8 "izay mikendry ny hameno ny banga toekarena an'ny Sony, elanelana izay tsy ananan'olona.
Manadino ny Kobo Glo HD izy ireo ary mahita tsy ampoizina
Mpitoraka bilaogy iray no nahita tsy nahy ny ao anatin'ny Kobo Glo HD, eReader izay mitondra tsy ampoizina toy ny mpamaky karatra sd manana karatra 4GB.
Ny Fictionary, ireo rakibolana ilaina ho an'ny Kindle antsika
Ny Fictionary dia tranonkala iray manolotra rakibolana foronina amin'ny siansa hanampy antsika amin'ny famakiana tantara foronina siansa, zavatra azo alaina ho an'ny Kindle.
Pocketbook Touch Lux 3, mpamaky iray hafa miaraka amin'i Carta?
Pocketbook dia efa manana eReader vaovao, ny Pocketbook Touch Lux 3, 6 "eReader miaraka amin'ny efijery teknolojia Carta, izay mampiasa ny Kobo Glo HD vaovao.
Kobo Glo HD vs Kindle Voyage, goavambe roa miaraka amin'ny Letter
Fampitahana kely eo amin'ny Kobo Glo HD sy ny Kindle Voyage, eReaders roa misy vahaolana avo indrindra amin'ny efijery E-Ink fa samy hafa ny vidiny.
Amazon dia niverina fotsy ho an'ny jirony
Amazon dia nanangana tamim-pomba ofisialy tao amin'ny fivarotany tany Shina ny Basic Kindle miaraka amin'ny loko fotsy ankoatry ny loko mainty, tsy fetezana izay nahagaga ny maro
Onyx Boox handefa eReader 13-inch
Araka ny nohamafisin'i Onyx Boox, amin'ny volana oktobra dia hahita eReader 13-inch izay iray amin'ireo lehibe indrindra ho an'ny mpampiasa farany na dia lafo aza ny vidiny.
Ity mpanonta ity dia hanao pirinty sy hamatotra ny boky tadiavinao ao anatin'ny 5 minitra
Ity mpanonta ity izay hitanay tsy ho ela tao amin'ny fivarotam-boky rehetra eto an-tany dia afaka manonta sy mamatotra ny boky tadiavinao ao anatin'ny minitra vitsy.
Ahoana ny fananana Flash amin'ny takelaka misy antsika sy ny Kindle Fire
Na dia miala amin'ny Adobe Flash aza ny tranonkala dia mbola maro ny tranonkala mangataka izany, noho izany dia ilaina ihany ny mametraka azy amin'ny Kindle Fire antsika.
Tantara ara-tantara 10 tokony hovakianao
Lisitry ny tantara manan-tantara 10 manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao. sa tsia. ny sanganasa izay tokony hovakin'izay rehetra liana amin'ity karazana ity.
Mahavita mampiato ny hacks an'ny Kindle-nao ve i Amazon sa tsia?
Amazon dia nahavita nandefa fanavaozana izay manakana ny hacks mety hitranga sy ny jailbreaks ao amin'ny eReaders an'ny fianakaviana Kindle, anisan'izany ireo taloha.
Hahita eReader misy takelaka fanoratana elektronika miloko ve isika amin'ity taona ity?
Lahatsoratra izay ezahantsika hamaly ny fanontaniana; Hahita eReader misy takelaka fanoratana elektronika miloko ve isika amin'ity taona ity?
Takelaka data ho an'ny Energy eReader Pro avy amin'ny Energy Sistem.
Inona ireo eReaders mora hack?
Lisitra tsotra iray amin'ireo fitaovana mora vonoina ary tsy natao ho an'ireo izay mikasa na te hanova ny eReader na ny takelaka misy azy ireo.
Kobo dia tao an-tsain'izy ireo hackers rehefa nanao ny Kobo Aura H2O
Ny fomba fijery faharoa an'ny Kobo Aura H2O dia namela hamantatra rafitra tsara ho an'ny asan'ireo mpijirika ao amin'ny eReader nefa tsy mila manelingelina ny mpamaky.
Firehetam-panahy HD 6
Lahatsoratra izay hamakafaka amin'ny antsipiriany ny Kindle Fire HD 6 avy any Amazon.
Izahay dia mamakafaka ny Energy eReader Pro
Flipbook eReader vaovao miaraka amin'ny efijery 12 ″?
Flipbook dia famolavolana eReader roa-efijery izay mampiasa fampisehoana e-ink roa "6. Avy amina frantsay ny endriny ary mitovy amin'ny hafa.
Onyx Boox manavao ny efijery lehibe eReader
Onyx Boox dia nanangana modely vaovao izay tsy inona fa ny fanavaozana ny M96, ilay efijery lehibe eReader, iorenan'ny Tagus Magno.
Bookerly, loharanom-baovao Amazon
Amazon dia nanatsara ny endriny farany amin'ny famakiana, antsoina hoe Bookerly izy ary amin'ny andro ho avy dia hapetraka amin'ny eReaders sy ny takelaka ampiasaina.
Angovo Ereader Slim, ny eReader manify indrindra avy amin'ny Energy Sistem
Ny Energy Sistem dia tsy vitan'ny hoe namono ny Energy EReader Pro fa koa naka eReaders mora vidy sy ireo fananana manokana toa ny Energy Ereader Slim.
La Casa del Libro dia mivarotra ny eReaders amin'ny vidiny latsaky ny 30 euro
Ny tranon'ny boky dia nanary ny trano teo am-baravarankely. Izy io no fivarotam-boky voalohany manolotra eReaders latsaky ny 30 euro, rakitsoratra eropeana.
Tagus Lux 2015 Famerenana
Manolotra anao ny fanadihadihana ny Tagus Lux 2015, famerenana manamarina fa ny AfterGlow 2 no Tagus Lux 2015 vaovao.
Netronix dia mampiseho eReader 13,3-inch
Mandritra ny CES dia afaka mahita eReaders mahaliana ianao toa ny farany avy amin'ny Netronix izay nampiseho eReader 13,3 santimetatra miaraka amin'ny Android sy mora vidy.
Ny sanganasan'i Martin Luther King sy Asimov dia hiditra ao amin'ny Public Domain amin'ny 2015
Taom-baovao sy asa maimaim-poana. Any Etazonia dia efa nambara ireo sanganasa izay hanjary ampahany amin'ny lisitry ny Public Domain Works.
Jereo ireo boky misy sy voarara amin'ny alàlan'ity infographic ity
Lahatsoratra izay ahitantsika infographic mahaliana izay mampiseho boky misy sy voarara.
5 eReaders amin'ny latsaky ny 100 euro hanontany an'ireo Mpanjaka telo
Misy eReaders tena mora vidy amin'izao fotoana izao, ka hatramin'ny 100 Euro dia afaka mividy eReader mahery izahay ary manome fahafaham-po ny fanirian'ireo mpamaky rehetra.
Takelaka mora vidy 5 hanontaniana an'ireo olon-kendry telo
Tsy misy sisa tavela ho an'ireo Magy Telolahy ary inona no tsara kokoa noho ny mahita sy mampitaha ireo takelaka mora vidy, latsaky ny 100 euro, izay azontsika angatahina ao amin'ilay taratasy ho an'ireo Mpanjaka telo.
Kindle Paperwhite Vs Nolimbook +; ny mpanjaka manohitra ny maniry
Andininy izay ampitahainay ny Kindle Paperwhite sy ny Nolimbook +, izay ny iray no mpanjakan'ny tsena ary ny iray kosa mpifaninana matotra.
Endri-javatra amin'ny Carrefour Nolimbook +. Jereo ity eReader ity amin'ny lalina.
BookBub motera fikarohana ao amin'ny tranonkala ho an'ny ebook maimaim-poana
BookBub dia rindranasa tranonkala izay mitady ebook maimaim-poana sy amidy ary mandefa anay ny valin'ny fikarohana amin'ny adiresy mailaka anay.
Izahay dia mizaha toetra sy mamakafaka ny vaovao Nolimbook +
Lahatsoratra izay hamakafaka, hizaha toetra ary hilaza aminao ny hevitray momba ny Nolimbook +, ilay Carrefour eReader vaovao.
Nolimbook sy Nolimbook +, Carrefour eReaders dia ofisialy any Espana ankehitriny
Lahatsoratra hahafantarantsika ireo Carrefour eReaders vaovao ary atao Batemy ho Nolimbook sy Nolimbook +
Ahoana ny fomba hanovana ireo rakitra pdf ho epub amin'ny Caliber
Fampianarana kely momba ny fomba hanovana ireo rakitra pdf ho Epub hahafahantsika mahita sy mamaky azy ireo tanteraka amin'ny eReader nefa tsy manasarotra ny fiainantsika.
Sony?, Havaozy ny eReader 13.3-inch anao na inona no mitovy amin'ny DPTS1
Lahatsoratra izay ahafantarantsika fa nanavao ny eReader i Sony amin'ny efijery 13,3-inch.
Amazon dia manolotra ny Kindle Touch efa voaverina sy voamarina ho 59 euro fotsiny
Lahatsoratra izay ahalalantsika fa i Amazon dia manolotra ny Kindle Touch efa voaverina sy voamarina ho 59 euro fotsiny amin'ny alàlan'ny tranokalany.
OpenDyslexic, ny endritsoratra noforonina hanatsarana ny famakiana ho an'ny olona disleksika
Ny dislexia dia sakana amin'ny olona maro afaka mamaky. Androany dia efa misy ny vahaolana noho ny fandrosoana sy ny fampiasana fitaovana toy ny OpenDyslexic
Nolim, Carrefour ary ny alternan'ny Bookeen amin'ny Kindle
Nolim no anaran'ilay eReader noforonin'i Carrefour sy Bookeen. Efa any Espana io ary hifanandrina amin'ny Amazon eReader sy La Casa del Libro
"Lector Electrónico Argentino", mpamorona eReader nataon'ny sy ho an'ny Arzantina
Lahatsoratra izay ahafantarantsika ny "Reader Elektronika Arzantina", eReader izay noforonina ary tsy hampiasain'ny Arzantina irery.
Ny RAE sy Arturo Pérez-Reverte dia manolotra antsika fanontana malaza an'ny "Don Quixote"
Lahatsoratra izay ahalalantsika ny fanontana malaza an'ny "Don Quixote" izay nomanin'ny RAE sy Arturo Pérez-Reverte ary hamidy tsy ho ela.
Ahoana ny fananana Google Drive amin'ny Kobo Glo anao
Na dia efa antitra aza izy ireo dia maro ny mpamaky no mety manana vaovao, toa an'i Kobo izay afaka manana Google Drive sy mampifandray ireo rakitra ataonay.
Fampitahana ny tahan'ny ebook ho an'ny famakiana nomerika
Ny serivisy famakiana amin'ny alàlan'ny streaming dia tena manandanja hatrany, hany ka aseho amin'ny ho avy ireo Flat Flat ho an'ny ebooks.
Izahay dia nisedra, nanadihady ary nankafy ny Kindle Fire HDX an'ny Amazon
Lahatsoratra izay hamakafaka amin'ny antsipiriany ny Amazon Kindle Fire HDX, izay nahatonga anay koa hankafy fatratra noho ny kalitao sy ny heriny lehibe.
Endri-javatra amin'ny Amazon Kindle Voyage. Jereo ity mpamaky ity amin'ny lalina.
Tolino Vision 2, iray hafa manohitra ny rano sy Amazon
Ny Tolino Alliance omaly dia nanolotra ireo fitaovany vaovao, anisan'izany ny Tolino Vision 2 eReader
Ana María Matute dia niverina tany an-tsehatra niaraka tamin'ny bokiny an-tapitrisany maro izay atolotray anao ny toko voalohany
Lahatsoratra izay ahafantarantsika ireo fanomezam-boninahitra azon'i Ana María Matute ary atolotray anao ihany koa ny toko voalohany amin'ny tantara an-dahatsorany.
Tena ilaina ve ny eReader tsy misy rano sy anaty rano?
Andininy izay hamaliantsika ny fanontaniana; Tena ilaina ve ny eReader tsy misy rano sy anaty rano?
Izahay dia nisedra sy nanadihady ny Fanontana Volafotsy an'ny nofinofy Wolder MiBuk
Lahatsoratra izay ampahafantarinay anao ny fanontana volafotsy an'ny Wolder MiBuk Dreams, eReader tena mahaliana miaraka amin'ny vidiny mahaliana kokoa.
Midira amin'ny tranomboky avy any Aldiko
Isan'andro dia misy fanatsarana vaovao ao amin'ny rindrambaiko, ny iray amin'izany dia ny fampidirana loharano OPDS amin'ireo rindranasa toa an'i Aldiko, ahafahantsika mamaky sy mikaroka.
Ampidiro ny Cloud anao manokana
Fampianarana kely momba ny fananana ny tranomboky Caliber ao amin'ny Cloud, azo idirana amin'ny fitaovana marani-tsaina rehetra ary na aiza na aiza amin'ny Internet.
E-Ink dia mampiseho efijery 32 ″ amin'ny ranomainty elektronika miloko
E-Ink dia mandefa efijery 32 "vaovao, efijery lehibe loko hanoloana ny afisy taratasy. Nefa ity ve no efijery E-Ink farany?
5 safidy tena izy amin'ny Pocket
Lahatsoratra misy ireo safidy 5 malaza indrindra hanoloana ny Pocket alohan'ny hanovana azy. Ireo safidy dimy dia maimaim-poana sy ho an'ny rafitra rehetra.
Ahoana ny fampiasana Caliber sy ny eReader tsy misy tariby
Tutorial momba ny fampiasana Caliber sy fitantanana ny eReader amin'ity programa ity ary tsy misy tariby hanaovana azy, noho ny tamba-jotra Wi-Fi akaiky indrindra.
Raiso ny ebook voalohany amin'ny Game of Thrones saga maimaim-poana
Alefaso amin'ny fomba ahazoana ny kinova elektronika amin'ny lohateny voalohany amin'ny saga Game of Thrones malaza. Ny fanomezana dia ho an'ny fankalazana ny Lektu.
Szenio 1600DC, eReader izay te-hifaninana amin'ny Kindle
Vaovao momba ny fanombohana ny Szenio 1600DC vaovao, ilay Szenio eReader vaovao izay mikendry ny hifaninana amin'ny Amazon Kindle any Espana.
Lahatsoratra izay hamakafakaantsika ny Papyre 630 amin'ny antsipiriany
miBuk Imagine, ilay mahery Whera eReader mahery
Kindle Paperwhite Vs Papyre 630, duel tsy mitovy amin'ny haavon'ny famakiana nomerika
Raha afaka mamaky ebook ianao ao anatin'ny 14 andro, maimaim-poana ny ebook
Vaovao momba ny lalàna vaovao any Alemana izay mamela ireo mpampiasa hamerina ny boky novidiana raha 14 andro no tsy nandalo ny datin'ny fividianana.
Fanadihadiana momba ny Papyre 630 amin'ny antsipiriany
Lahatsoratra izay asehonay aminao ny famakafakana ny Papyre 630 amin'ny antsipiriany
Endri-javatra amin'ny Amazon Kindle Paperwhite. Jereo ity eReader ity amin'ny lalina.
Tolino Vision, ilay eReader vaovao an'ny Alliance Tolino
Vaovao momba ny fanombohana ny Tolino Vision, ny Tolino Alliance eReader vaovao izay hampiasa ny teknolojia Carta.
Ny fifandraisana hafahafa eo amin'i Amazon sy Open Source
Lahatsoratra momba ny fifandraisana hafahafa ananan'i Amazon miaraka amin'ny rindrambaiko Open Source, iray amin'ireo loharano nisotroan'ilay goavambe ary mitondra tombony
Boky mifanohitra amin'ny eReader Inona no mandoto bebe kokoa?
Lahatsoratra hita taratra izay singa maloto indrindra, raha ilay boky misy taratasy sy fanodinana na ilay eReader miaraka amin'ny bateriny sy ny fanjifany angovo.
Amazon dia mividy anao ny eReader taloha
Vaovao momba ny programa Amazon vaovao izay ividianany antsika eReader vaovao vaovao ary manome vola hividianana Kindle vaovao.
BookBook, tranga miendrika boky mahaliana ho an'ny iPad Air
Lahatsoratra izay asehonay aminao ny BookBook, tranga miendrika boky mahaliana ho an'ny iPad Air
Tsindrio 2 Call, Kobo manatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Vaovao momba ny fivoahan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa vaovao an'i Kobo, Click 2 Call, izay mikendry ny hanatsara ny ora fiandrasan'ny mpanjifa.
HP dia manolotra ny takelaka vaovao HP 8 1401 izay mirehareha amin'ny vidiny sy ny fiasa
PocketBook Ultra, ilay eReader manenjika boky
Vaovao momba ny fandefasana Pocketbook Ultra amin'ny ho avy, eReader Pocketbook izay manana fakan-tsary ahafahantsika manadihady antontan-taratasy.
Fnac Junior Tablet, filokana 'zaza' avy amin'i Bq sy Fnac
Lahatsoratra momba ny Fnac Junior Tablet, takelaka noforonina ho an'ny ankizy kely noforonin'ny orinasa Espaniola Bq Readers ary amidin'ny Fnac.
Rohy sa fanamarihana ambany pejy?
Lahatsoratra momba ny hevitra navoakany momba ny rohy na ny fanovozan-kevitra eny ambanin'ny pejy, ny niafaran'ilay voalohany niaraka tamin'ilay farany tamin'ny ebook
Mozilla Firefox, mpizaha tena tonga lafatra ho an'ny mpamaky
Lahatsoratra kely momba an'i Mozilla Firefox sy ny kinova farany ho an'ny finday, izay mitondra fanatsarana ho an'ireo izay tia mamaky teny.
Famerenana ny Sony eReader vaovao: ny Sony PRS-T3
Famerenana ny Sony PRS-T3, ilay eReader vaovao izay navelan'ny tovolahy tao amin'ny Sony hamerenany ny heviny ary hanome ny hevitray momba ny Sony eReader farany
Moon + Reader, fampiharana famakiana feno tokoa
Lahatsoratra momba ny Moon + Reader, rindranasa famakiana ho an'ny takelaka Android izay nanolorana soso-kevitra tsy ho an'ny zavatra atolotra fotsiny fa ho an'ny fifandraisany amin'i Caliber
Mety voan'ny virus amin'ny solosaina ve ny eReader antsika?
Lahatsoratra momba ny virus amin'ny solosaina ao amin'ny eReaders sy ny fomba azo ialana amin'ny risika kely ho an'ny eReader.
Izy ireo dia mahavita mametraka Android amin'ny (efa ho) Kobo eReaders rehetra
Vaovao momba ny famolavolana kinova Android 2.3.7 ho an'ny Kobo eReaders, ho an'ny ankamaroan'ny olona ankoatran'ny Kobo Aura vaovao izay tsy manohana azy.
Ahoana ny fampiasana karatra fampidinana ebook
Fampianarana kely momba ny fampiasana karatra fampidinana hividianana ebook amin'ny alàlan'ny fivarotam-boky amin'ny Internet. Karatra mora hita any Espana no nampiasaina
Scribd dia mandefa ny fampiharana mamaky azy ao amin'ny Amazon Appstore
Vaovao momba ny fanombohana ny Scribd ao amin'ny Amazon Appstore. Ny fampiharana Scribd dia manome ny serivisy famakiana amin'ny alàlan'ny streaming.
Fitaovana ilaina 5 ho an'ny Caliber
Lahatsoratra momba ny lisitry ny kojakoja ilaina 5 ilaina ao amin'ny Kaliberanay. Miresaka momba ny add-on eReader manatsara azy koa aho.
Ianaro ny fomba fakana pikantsary amin'ny Kindle
Ianaro ny fomba fakana pikantsary amin'ny Kindle amin'ity fampianarana tsotra ity
PiPad na ny fomba fananganana takelaka misy antsika
Lahatsoratra momba ny lesona nataon'i Michael K. Castor momba ny PiPad, takelaka vita an-trano namboarina avy amin'ny Raspberry Pi, efijery sy batery iray.
Nimbooks, rindrambaiko iray miasa toa an'i Caliber in the Cloud
Lahatsoratra momba ny Nimbooks, rindrambaiko iray manolotra anay serivisy mitovy amin'ny Caliber fa amin'ny alàlan'ny Cloud, izay hitantanana ny ebooks-nay.
FBReader, fampiharana finday hovakiana amin'ny solosaina
Lahatsoratra momba FBReader, programa lozisialy maimaim-poana mety amin'ny famakiana boky amin'ny finday na amin'ny solosaina birao.
Takelaka inona no hividy amin'ity Krismasy ity nefa tsy manahirana ny fiainanao
Torolalana kely hividianana na hanome takelaka amin'ity Krismasy ity, ao anatin'izany ny safidy maromaro ho an'ireo lavitra indrindra ao anatin'ity vanim-potoana Krismasy ity.
Amidio ambany, mividiana avo, maodelin'ny orinasa Amazon
Lahatsoratra momba ny maodelin'ny asa aman-draharaha Amazon sy ny fomba fivarotana mora amin'ny Kindle dia mahatonga ny mpanjifa hividy fividianana avo kokoa ary hahazo vola Amazon.
Ny booktype dia manampy anao hamorona boky amin'ny Internet
Lahatsoratra momba ny Booktype, fitaovana fanontana, izay apetraka amin'ny mpizara ho an'ny famoronana sanganasa izay iarahan'ny mpanoratra maromaro miara-miasa.
Inona no eReader hanome an'ity Krismasy ity
Torolàlana fiantsenana kely hitarika anao rehefa manome eReader amin'ity Noely ity. Manolotra safidy hafa, misy any Espana daholo izy ireo.
Kindle FreeTime, endri-javatra mahaliana any Amazon
Lahatsoratra momba ny serivisy Amazon vaovao sy mahaliana, Kindle FreeTime, asa fanaraha-maso ny ray aman-dreny izay hanampy antsika amin'ny fanabeazana ireo zanatsika
Tambajotra sosialy 4 ho an'ny mpamaky tery indrindra
Lahatsoratra amin'ny tambajotra sosialy efatra ho an'ny mpamaky indrindra izay maneho solony tsara ho an'ireo izay tsy te hampiasa Goodreads
Kindleberry Pi, mpamaky sa minicomputer?
Lahatsoratra momba Kindleberry Pi, fanovana ny Kindle izay ahafahantsika mampifangaro Kindle amin'ny Raspberry Pi ary manana minipc miaraka amin'ny efijery Kindle
Tsara, aseho ny teknolojia E-Ink vaovao
Vaovao momba ny teknolojia fampisehoana ranomainty vaovao antsoina hoe Fina avy amin'ny mpanamboatra E-Ink. Teknolojia tsara ho an'ny eReaders lehibe.
Zon'ny mpamorona sy ny olan'ny fahazoan-dàlana
Andininy momba ny zon'ny mpamorona sy ny fahazoan-dàlana iorenan'ny zon'ny asa ary mihetsika tsy miankina amin'ny mpanoratra.